Ubona ubungozi kwiPirates ebuya esibhaxwini esinzima uNcikazi we-Arrows - Impempe
Ubona ubungozi kwiPirates ebuya esibhaxwini esinzima uNcikazi we-Arrows
Umqeqeshi weLamomtville Golden Arrows, uMandla Ncikazi uyibona iyingozi i-Orlando Pirates, futhi akakholwa ukuthi ukushaywa kwayo yiBlack Leopards ngo 2-0 ngeSonto kuzoba nomthelela otheni emdlalweni wabo olandelayo. IBhakaBhaka lizunywe yiLidoda Duvha kungezelele muntu, yaliphoxa labuyela ekhaya imisila ingaphansi kwezinyawo.
Nokho iPirates izobheka ukukhohlwa okwenzeke eVenda uma seyibhekene naBafana Bes’thende e-Orlando Stadium ngoLwesithathu ngo 5 ntambama emdlalweni weDStv Premiership.
“Kuzoba wumdlalo onzima sibhekene nembangi enzima,” kuvuma uNcikazi. “IPirates yiqembu elihle kakhulu, mhlawumbe akufanele sigxile kakhulu emphumeleni wabo odlule. Kumele ukhumbule nokuhle ngabo, okokuqala ubungozi ngabo wukuthi bengashintsha indlela abadlala ngayo kaningi emdlalweni owodwa. Okwesibili, banabadlali abasezingeni liphzulu yonke indawo ngakho akulula ukuthi kuzokwenzekani ngabo ngemuva komphumela omubi abawutholile. Ngabe bazoshintsha indlela abadlala ngayo noma abadlali abaqala umdlalo?,” kusho uNcikazi.
IPirates isendaweni yesihlanu kumanje ngemuva kokuqoqa amaphuzu angu-17 emidlalweni engu-11. Isele ngephuzu elilodwa ku-Arrows esendaweni yesine kanti Abafana Bes’thende basenomdlalo owodwa abalandela ngawo ngemuva.
“Uma udlala nePirates kumele ulindele umdlalo onzima noma ngabe isimo sinjani. Kodwa mina ngikhetha ukugxila eqenjini lami, sizilungiselele kahle ukuvimba emuva bese siphuma sesindiza sesiyohlasela uma sesilitholile ibhola. Ngikholwa wukuthi lokho kuzositholela umphumela omuhle.
“Nginethemba uma ngibheka engisakubonile eqenjini lami okwamanje,” kuchaza lo mqeqeshi oneminyaka engu-51.
Abafana Bes’thende bangelinye lamaqembu amathathu – okukhona iMamelodi Sundowns neSwallows FC – angakayizwa induku kule sizini kwiDStv Premiership.
Previous Previous post: Okwamanje akuhambi kahle: Manqoba Mngqithi
Next Next post: UTruter uthi akukajiki lutho ngabekelwe ukukuzuza kwiSwallows kule sizini